Sophtal - Eye Drops (ဆိုဖ်တယ်လ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Sophtal – Eye Drops (ဆိုဖ်တယ်လ်)
Sophtal - Eye Drops (ဆိုဖ်တယ်လ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Sophtal - Eye Drops (ဆိုဖ်တယ်လ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Sophtal – Eye Drops (ဆိုဖ်တယ်လ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Sophtal® ကို မျက်ခွံရောင်ခြင်း၊မျက်ဖြူသားရောင်ခြင်း၊ဖုံအမှုန်၊မီးခိုး သို့မဟုတ် နေရောင်ကြောင့် မျက်စိထိခိုက်ခြင်း၊ကသိကအောင့်ဖြစ်ခြင်းတို့ကို သက်သာပျောက်ကင်းစေဖို့ အဓိက အသုံးပြုပါတယ်။ ကူးစက်ပိုးဝင်တဲ့ အနေအထားတွေမှာတော့ လုံလောက်တဲ့ ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ တွဲဖက်အသုံးမပြုဘဲ ဒီဆေးတမျိုးတည်းကို မသုံးသင့်ပါဘူး။Sophtal® ကို အခြားသော ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လည်း အသုံးပြုနိုင်သေးတဲ့အတွက် အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိနိုင်ဖို့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူတွေကို မေးမြန်းရပါမယ်။
Sophtal – Eye Drops (ဆိုဖ်တယ်လ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
သင့်လက်တွေကို သေချာစွာ ဆေးကြောပါ။ ပြီးရင် မှန်ရှေ့မှာ ထိုင်ပါ သို့မဟုတ် မတ်တပ်ရပ်ပါ။
ခေါင်းကိုနောက်လှန်ပါ။ အောက်မျက်ခမ်းကို အသာအယာ ဆွဲချပါ။
မျက်စဉ်းပုလင်းကို မျက်လုံးအပေါ်ယူပါ။ အောက်မျက်ခမ်းကို အသာအယာဆွဲချထားလို့ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ခပ်ချိုင့်ချိုင့်နေရာလေးထဲကို မျက်စဉ်းတစက် ချပါ။ ပိုးကူးစက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့အတွက် မျက်စဉ်းပုလင်းထိပ်နဲ့ သင့်မျက်လုံး၊မျက်တောင်မွှေး ဒါမှမဟုတ် ဘာနဲ့မှ မထိပါစေနဲ့။
မျက်စဉ်းခတ်ပြီးတဲ့အခါ မျက်ခမ်းကို ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီး ခေါင်းကို အောက်ငုံ့ကာ တတ်နိုင်သမျှ ကြာကြာမျက်စိမှိတ်ထားပါ(အနည်းဆုံး ၂ – ၃ မိနစ်လောက်ပေါ့)။
မျက်ရည်ပြွန်ရှိရာ (မျက်လုံးရဲ့ အတွင်းဖက်ထောင့်) နေရာကို လက်ချောင်းလေးနဲ့ တမိနစ်လောက်ဖိထားရပါမယ်။
တကယ်လို့ မျက်စိနှစ်ဖက်လုံးအတွက် ခတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင် နောက်တဖက်ကိုလည်း အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ နည်းလမ်းအဆင့်ဆင့်အတိုင်း ခတ်ပါ။
တချိန်တည်းမှာ မျက်စဉ်းနှစ်မျိုးခတ်ရမယ်ဆိုရင် မျက်စဉ်းတမျိုးနဲ့ တမျိုးအကြားမှာ အနည်းဆုံး ငါးမိနစ်လောက်တော့ စောင့်ပြီးမှ ခတ်ရပါမယ်။ ဒါမှသာ ပထမမျက်စဉ်းရဲ့ အာနိသင်ကို လျော့မသွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးအသုံးပြုပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မရှင်းလင်းတာ၊သိရှိလိုတာတွေရှိရင် ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Sophtal – Eye Drops (ဆိုဖ်တယ်လ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Sophtal® ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Sophtal® ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Sophtal® ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Sophtal® ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Sophtal® ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Sophtal – Eye Drops (ဆိုဖ်တယ်လ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Sophtal® ကိုမသုံးစွဲခင်မှာ ဘယ်အချက်အလက်တွေကို သိထားသင့်သလဲ။
Sophtal® ကိုမသုံးစွဲခင်မှာ အောက်ပါအချက်တွေရှိရင် ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောရပါမယ်။
Sophtal® ရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ ဒါမှမဟုတ် အခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Sophtal – Eye Drops (ဆိုဖ်တယ်လ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Sophtal – Eye Drops (ဆိုဖ်တယ်လ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအပြင် အခြားသော လက္ခဏာတွေလည်း ရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထပ်မံသိရှိလိုရင် သင့်ဆရာဝန်ထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။
Sophtal® က အောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
အချို့သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ပြင်းထန်တဲ့အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာတွေ ပေါ်ပေါက်လာရင် ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးပြသပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Sophtal – Eye Drops (ဆိုဖ်တယ်လ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Sophtal® ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ အောက်ပါဆေးတွေက Sophtal® နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။
အခြားသော အက်စ်ပရင်ဆေးများ၊salicylate ပါဝင်သော ဆေးများ။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Sophtal – Eye Drops (ဆိုဖ်တယ်လ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Sophtal® က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Sophtal – Eye Drops (ဆိုဖ်တယ်လ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
တနေ့ကို နှစ်ကြိမ်မှ လေးကြိမ်အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Sophtal – Eye Drops (ဆိုဖ်တယ်လ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Sophtal – Eye Drops (ဆိုဖ်တယ်လ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Sophtal® ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Sophtal® မျက်စဉ်းဆေး 0.1 % ၁၀ စီစီ။
Sophtal® ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Sophtal® (Salicylic acid) -POS® N eye drops.
https://www.ursapharm.de/en/products/ophthalmology/Sophtal-pos- n-2/. Accessed
Sophtal® (Salicylic acid). http://www.mims.com/vietnam/drug/info/Sophtal. Accessed